Codka Shacabka Soomaaliyeed | Codka Shabacku waa ilaaliyaha xuquuqda shacabka Soomaaliyeed. Fadlan taageer.
31/03/2020 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Xaaladda murugada leh ee uu xanuunkan adduunka oo dhan simay keenay ma aha mid la soo koobi karo dhinacyo badan ayuuna saameyn ku yeeshay kuna yeelan doonaa oo cid garanayso xaalku sida uu ahaan doono maalmo ka dib ma jiraan, hadana waxaa lagama maarmaan ah in wax badan la iska warsado khaasatan bahda waxbarashada iyo wasaaraduba isweydiiyaan, sida wax la yeeli doono haddii xaalladu sidaan sii ahaato. Dheeho inta ka hartay qormadaan →
22/02/2020 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
(Qoraalkan waxaan qoray sanad ka hor)
Horumarinta waxbarashada dalka waa furaha helitaanka bulsho ujeed mideysan leh oo iyagu qaabeeya qaabka ay rabaan inay dadkoodu ula jaan qaadaan isbedelka xowliga ah ee uu caalamku maalin kasta ku sii dhaqaaqayo. Waana heerka waxbarashada waxa keena horumarka amaba dib u dhaca bulsho ku yimaada.
In kasta oo aanan la inkiri Karin waqtiga adag ee uu dalkeennu soo maray, hadana waxaanan la dayalsan Karin tillaabooyinka ay madaxda dalku ay ku tillaabsadeen amaba ay qorsheynayaan. Waxaana sax ah inay jiraan caqabado badan oo aanan suurta gal ka dhigeynin wax kasta oo ay dowladdu rabi laheyd inay wax ka qabato, oo ay ugu horeyso miisaaniyad yari dalka oo dhan oo kallifeysa in aanan si ballaaran loo hirgelin Karin adeegyo badan oo aasaasi ah maadaama wixii la sameeyaba ay qoondo gooni ah u baahan tahay. Dheeho inta ka hartay qormadaan →
10/02/2020 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Inta aan su’aashaa jawaabteeda aanan si ballaaran uga jawaabin, waxaa jira waxyaabo badan oo loo baahan yahay inaan marka hore isla fahanno taas oo ay ugu horreyso, ujeedka waxbarashada iyo sababta wadan kastaaba uu u yeesho waxbarasho gaar ah oo ay iyagu si gaar ah u abaabushaan una ilaashaashadaan oo weliba wadamada qaar ay qaabkii waxbarashadadooda iyo dhaqankooda ay rabaan inay caalamka oo dhan uga dhigaan dhaqan amaba habka loo fikiro. Marka ujeedka waxabarashada aan isla fahanno, hadana waxaa loo baahan yahay inaan isla fahanno taariikhda waxabarashada Soomaaliya iyo heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay iyo meesha ay maanta joogto. Waxaa kaloo aynnu u baahannahay inaan fahanno, dhibaatooyinka ka dhashay burburkii dalka ee ku aadan waxbarashada dalka iyo sida ay dowladihii kala danbeeyay ay isugu dayayeen inay arintaa wax ka qabtaan iyo maanta waxa nala haboon si aan u helno waxbarasho tayadeeda la isku haleyn karo oo dal iyo dibadba ardayda dhigata iyo dalkaba anfacta, dalkeenana u horseedda horumarka dhaqan dhaqaale ee laga rabo in waxbarasho wadan ay dalkeeda gaarsiiso. Dheeho inta ka hartay qormadaan →
Doodani waxa ay si lama filaan ah uga billaabatay bogagga dadku ku wada hadlaan markii dowladda Soomaaliya ku guulaysatay inay daabacdo buugaagtii ay ardaydu wax ka baran lahaayeen ee illaa sanadka siddeedaad oo weliba dhallin badani waxa ay ku doodeen, marka aan soo koobo, in ay dalka u fiicnaan laheyd in wax lagu barto Afka Ingiriiska iyadoo la fiirinayo dhowr waxyaabood oo ay ugu hormariyeen; in luqaddeenno ay ugub tahay oo aysan laheyn waxbadan oo ay leedahay luqadda Ingiriiska, in Af-Ingiriisku maanta yahay kan caalamka oo dhan wax lagu barto. Inuu ardayda u fududeynayo inay waxbarashadooda sii wataan oo caalamka meelo badan wax ka sii baran karaan iyo in shaqo helidda ay fudud tahay haddii aad taqaanno Af-Ingiriiska. Dheeho inta ka hartay qormadaan →
Soomaaliyey, wada hadla oo si laab xaaran u wada hadla oo midnimo ku heshiiya. Ka gudba wixii shalay.
24/12/2019 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Xaaji Jayte oo walwal badan ka muujiyay mustaqbalka dalka.
27/04/2019 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Maanta oo aan waqti dheer isu helnay aniga iyo saaxiibkey Jayte ayuu si dheer iiga hadlay sheeko dheer oo ku saabsan aayaha dalka iyo sida uu uga walwalsan yahay iyo weliba rajada uu qabay iyo waxa uu maanta maqlaayo.
Markuu muddo aamusnaaday ayuu Jayte igu yiri: Saaxiib, waa ayaan raddo weyn inaan meel aan u soconnoba aanan aqoonin.
Jaamac: Anoo yaaban ayaan waxaan ku iri Jayte, maxaad ka hadlaysaa, markaas ayuu iigu celiyay, haddaadanba adigu I fahmeynin waxaan sheegaayo waxbaa ka jira. Kaligey ayaan dib u fariistay oo waxaan is iri odayga ma loo soo socdaa waa kan maanta kaligiis sheekeysanaaye.
Jaamac: Anoo kaligey is weydiinaaya waxa uu Jeyte ka hadlaayo ayuu isagoo hadal dabacsan ku hadlaaya igu yiri; Saaxiib, horta waxaan ummadda Soomaaliyeed heysannin aniga ima heystaan oo aniga wax ii gaar ah ma leh balse waxaan rabaa inaan ku tusaaleeyo waxa aan soo arkay iyo sida aan filaalay iyo sida hadda wax u muuqdaan.
Jayte: Anigu waxaan ahay ilmihii kacaanka markuu dalka qabsaday dhashay oo arkay kaliya dowladdii kacaanka. Waxaan heystay wax kasta oo cunug yar oo caalamka ku nool uu heystay oo waxa ay isugu jireen wax waalidkey uu I siiyo iyo wax dowladdu I siiso oo raashinka ma ahane wax kasta oo kale oo ay ku jiraan caafimaad, waxbarasho iyo adeeg kasta dowladda ayaan ka heli jiray. Waxaan ku soo koray magaalo madaxda dalka oo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay Soomaaliya dhulka la yiraahdo ay uga noolaayeenba ay dhammaantood wada deganaayeen oo waxaan deris aheyn 5ta Soomaaliyeed dad ka kala yimid. Waxaan dalka ku gaaray illaa heer jaamacadeed oo waxaan soo dhigtay Jaamaccaddii ummadda oo waxaa wax ii dhigi jiray macallimiin lataliyaal u ahaa madaxweynihii hore dalka iyo qaar iyaguna madax sare dalka ka soo qabtay oo maanta badankood aysan noolay Dheeho inta ka hartay qormadaan →
Aabo, ma maantoon baaba’nay ayaad na soo raadisay hooyadeenna ay ku jirto isbitaalka dhimirka?
14/01/2019 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Maxammed aabihii Xassan oo aanan war u heynin waxaas oo dhan, ayaa loo sheegay in wiilkiisii lagu xukumay inuusan dukaamada magaalada tegi Karin oo laga mamnuucay maadaama lagu qabtay isaga oo wax xadaya. Maxamed aabihii waxa uu isla markiiba billaabay inuu yiraa, “waan filaayay inuu saan noqonaayo maadaama aysan hooyadii ka warqabin oo aysanna talateyda qaadanaynin”. Hooyo Xaliimo oo muddo dheer u adkeysan la’eed erayada Xassan iyo masuuliyad darradiisa ayaa meel aan u dheerayn kaga soo dhawaaqday, “ma shaqadaad dayacday ayaad aniga igu eedeysaa” markaas ayey waxa ay ku dartay “ma waanan tiro ka toban jeer kuu sheegin, xaaladda wiilkaan, oo aan ku dhihin walaalow wiilkaan ka warqab oo xilli qatar ah ayuu ku jiraahe ha igu halaynin. Ma waadan ilaahey ka cabsaneynin. Fadlan asxaan ii samee ee I dhaaf oo aniga iyo ilmaheyga na dhaaf, oo haddaadan waxba noo tereynin dhibkaada nala dhaaf. Haddaan baaba’ayno iyo haddii kaleba aan isku tashanno intaan kugu tashan lahaaye walaalow dib ha noogu soo noqon”.
Oday Xassan oo aad u malayso inuu intaas sugaayay ayaa gurigii intuu alaab heystay ka aruursaday oo ku goodiyay “adiga iyo ilmahaadu haddii aad iga maarantaan waa la arki doonaa ee yaan la iga soo daba wactamin”. Ciil iyo caro darteed Xaliimo, waxa ay maalmo dhan ku celcelinaysay “maanaa kaa daba wactamaya, ilaahow ha ii kasin”.
Xaliimo iyo Xassan oo aan sheekadii dhameynin, ayaa waxaa albaabkii soo garaacay askeri boolis ah oo raadinaya Maxamed. Sedexdii magac oo Maxamed ayuu sheegay askerigu sheegay, waxa uuna weydiiyay inuu Maxamed gurigaan degan yahay. Hooyo Xaliimo markii ay Booliska aragtay ayey afka furatay oo ay oohin iyo qeylo isku dartay oo waxa ay tiri “aniga hadalkeyga diidaye Xassanow, bal fiiri heerka uu marayo” intaas markii ay tirina wey miir beeshay. Aabo Xassan oo yaaban iyo askerigii ayaa billaabay inay ambalaas u wacaan Xaliimo si gargaar degdeg ah loogu sameeyo. Xassan talaa ku cadaatay, hadana weli waxa uu leeyahay; “islaantaan kibirka badan inta wiilkeeda kibirka ka badiso ayey hadana isi suuxinaysaa, wallee iyada iyo wiilkaba anaa aqaan waxa aan ka sameynayo” halkaa ayuuna goodin ka sii waday oo uu weliba ku daray, “haddii ay i maqli waayaan iyagoo dhan Ayaan isaga dhex baxayaa, anigu inaan isla hadlo dalkaan uma soo doonan” Waa yaab! Su’aashuna wxa ay tahay yuu uga tegayaa Xassan reerkiisa? Yuu rabaa inay ilaaliyaan? Mase illowsan yahay waajibaadkiisa? Xaliimana isbitaalka ayaa loo qaaday, booliskiina waxa uu u sheegay inuu reerka dib ugu soo noqon doono marka Xaliima isbitaalka laga soo saaro. Dheeho inta ka hartay qormadaan →
Maxamed, waa labo iyo toban jir kuna dhashay dalka Ingiriiska. Waxa uu la nool yahay aabihii iyo hooyadii iyo laba caruur ah oo aad uga yar yar, waxa uuna sanadkaan billaabay dugsi sare oo uu dad badan ka aqoonin. Maalin kasta marka uu ka soo noqdo iskuulka oo ay hooyo ka keento, maalmaha uu banooniga iyo dugsiga leeyahay ma ahane maalmaha kale waxa uu badanaa ku mashquulaa inuu layliyadiisa sameeyo galbihii ka bacdina waxa uu fiirsada taleefishinka, sideeda fiidnimo marka lagaarana wuu seexdaa.
Maxamed siduu sidaas u ahaa ayuu billaabay inuu isagu su’aalo isweydiiyo oo uu weliba Hooyo, Xaliimo weydiiyo su’aalaha qaar. Sua’aalaha ugu badanaana isagaaaba isweydiin jiray oo waxa uu dhihi jiray: “Aaway Aabahey? Mar kasta oo aan hooyo weydiiyo aaway aabo, waxa ay I leedahay waxa uu jiraa shaqo. Xalay ma arag, maanta inaan arkaayana u malayn maayo. Hooyaa Iskuulka I geysa, dugsiga Quraanka I geysa, banooniga I geysa, isbitaalka I geysa, oo weliba maalin kasta raashin ii sameysa”. Mararka kaliya uu Maxamed aabo fursad ku helana waxaaba aabihii ugu jawaabaa isagoo degdegsan “Aabo su’aalo badanidaa!, orodoo hooyadaa u tag oo weydii waxa aad rabto anigu waa daahsanahay oo meel baan u degdegayaa” marka uu hooyadii la hadlana waxa uu helaa isla jawaabtii uu heli jiray. Dheeho inta ka hartay qormadaan →